China PLASTIC MOLD STEEL orinasa sy mpanamboatra | Histar
TAPAKA vy vita amin'ny plastika
Maty BLOCK ny vy vy vy
Fitaovana asa-miasa vy
Steel bobongolo plastika
Henjana sy henjana
Amin'ny ankapobeny plastika bobongolo vita amin'ny plastika nomenay:
famolahana faratampony, fanoherana ny harafesina tsara, ary fanoherana tsara hitafy. fitaovam-pifidianana ho an'ny fanamboarana fitaovana famolavolana plastika izay mila famolavolana voadio tsara kalitao avo indrindra
lasitra ho an'ny kapila matevina (CD), fitaovana laboratoara ara-pitsaboana, lantana optika ary singa hafa, izay mitaky fanatsarana ny haavon'ny toerana ambony.
fahadiovana / homogeneity avo lenta, matanjaka amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny harafesina, ny famolahana tsara, matetika omena amin'ny toetr'andro maty sy tezitra miaraka amin'ny hamafin'ny 300 HB eo ho eo.
Ho an'ny bobongolo miaraka amin'ny fanoherana mahery vaika ampiasaina amin'ny solomaso fakan-tsary, maty noho ny fanerena ireo singa mahery setra simika
Ny vy vita amin'ny plastika efa voaomana, ny hamafin'ny toetr'andro nomena 280-320 HB izay miavaka amin'ny fahamendrehana tsara amin'ny haavon'ny tanjaka antonony tsara sy ny fahaizana mametaka, ny fanoherana ny harafesina ary ny vidin'ny milina mandaitra.
Lasitra plastika, frame bobongolo ho an'ny bobongolo plastika ary famoahana tsindry maty, famonoana fitaovana ary fitaovana ho an'ireo maty ho an'ny zinc.
Ny vy vita amin'ny plastika efa voaomana, ny hamafin'ny toetr'andro nomena 280-320 HB Ny votoatin'ny nikela avo (1%) dia namboarina manokana mba hiantohana ny homogeneity tonga lafatra amin'ny firafitra sy ny hamafin'ny alàlan'ny hateviny na dia ho an'ny sakana matevina aza, famolavolana tsara, fanoherana harafesina sahaza, fahaizana milina tsara.
Matevina lehibe ny tsindrona plastika sy ny famolavolana bobongolo, ny lasitra bobongolo ho an'ny fanariana tsindry maty, fanamafisana ireo mpandray
VOAFADY adino avokoa ny sisiny rehetra
Previous: SASITRAKA MILLED
Manaraka: KOA FAMONO
Takelaka vy vita amin'ny plastika
Vy vy plastika
Tct Circular Saw Blade, Tct Circular Saw Blade Fa Metal, Tct Boribory Saw Saw, Hss M2 Boribory Saw Blades, Fitaovana fiasan-damba mafana vita amin'ny vy vita amin'ny vy, Hss M35 Boribory Saw Saw,